के यो एक Amazon बिक्री सल्लाहकार भाडामा उचित छ?
इ-वाणिज्य व्यापारमा अनुभव गर्ने अनलाइन व्यापारीहरूले प्राय: अमेजनमा उत्पादन सुरु गर्दा समस्या सामना गर्दछन्. तपाईलाई थाहा छ, यो सिद्धान्त अभ्यास बाट फरक छ. यही कारण यो प्राय: अमेजन गाइड र ट्यूटोरियलबाट सिद्धान्त अध्ययन गर्न पर्याप्त छैन. तपाईलाई कसैलाई चाहिन्छ जसले जान्छ कि अमेजन-ह्यान्डिङ प्रणाली कसरी पहिलो-हस्त अनुभवको साथ काम गर्दछ. यसैले यो केहि विशेषज्ञ परामर्श को लागी उचित छ.
अमेजन व्यापारिकहरू किन बिक्रेता सल्लाहकारहरू खोज्दैछन् मुख्य कारणहरू छन्:
विक्रेताहरूले आफ्नो पैसा आउन यातायातको कम प्रतिशतको कारण तालिकामा आफ्नो पैसा छोड्न चाहँदैनन्। लिस्टिंग;
व्यापारीहरू अमेजनमा कुनै अवस्थित उपस्थिति छैन र सम्भावित ग्राहकहरूको लागि आफ्नो उत्पादनहरू हेर्न चाहन्छन्;
यदि पहिले नै अमेजन उत्पादहरूमा अस्तित्वमा रहेका अन्य कम्पनी र पुनर्विक्रेताहरूले बेचेका छन्;
जब व्यापारीले यो महसुस गर्छन् कि तिनीहरू पनि प्रदर्शन गर्दैनन् र यो हुन सक्छ.
यी सबै मुद्दाहरू समाधान गर्न सकिन्छ. तथापि, तपाईंलाई हालको अमेजन रेटिङको अनुसन्धान र विश्लेषणमा केहि समय खर्च गर्न आवश्यक छ. त्यसपछि तपाइँलाई एक चरण-दर-मार्केट अभियान निर्माण गर्न आवश्यक छ, धेरै उपकरणहरू र अनुकूलन चलनहरू लागू गर्न. यसलाई केही विशेष ज्ञान र अनुभव चाहिन्छ.
त्यहाँ आफ्नो आफ्नै अमेजन च्यानल प्रबन्ध गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू छन्. यद्यपि, तिनीहरू सबै व्यवसाय-समय र पैसाको दुईवटा सिद्धान्तहरूमा आउँछन्. तपाईंले आफ्नै मा मार्केटिंग अभियान निर्माण गर्न थप समय खर्च गर्न आवश्यक छ. त्यसपछि तपाई सोच्नुहुन्छ कि तपाईलाई राम्रो तरिकाले अनुकूलित अमेजन सूचीकरण गर्न सक्नुहुनेछ. तथापि, अझै पनि, तपाईं को लागी आफ्नो अमेजन व्यापारमा सबै अनुकूलन रणनीतिहरु लागू गर्न समय को कारणले गर्दा तपाईं कसरी गुमाउन सक्नुहुन्छ पैसा गणना गर्न आवश्यक छ. यो समय र पैसा बीचको मध्य मध्यस्थता छैन जब यो व्यवसायको विकासमा आउँछ. यही कारणले गर्दा अधिकांश व्यवसायहरूले उनीहरूको समय र पैसा बचत गर्न पेशेवर अमेजन बिक्री बिक्री सल्लाहकारहरूमा निर्भर रहन्छन्.
यस आलेखमा, हामी मुख्य कारणहरू छलफल गर्न जाँदैछौं किन यो अमेजन बिक्री बिक्री सल्लाहकारसँग सहयोग गर्न सजिलो छ किनकि तपाईंको आफ्नै व्यवसाय व्यवस्थापन.
अमेजन बिक्री बिक्री सल्लाहकार
को लागी प्राथमिक कारणहरू तपाईले अमेजन बिक्री बिक्रीको साथ सहयोग गरेर, तपाईं सिक्नका लागि वक्र छोड्न सक्नुहुन्छ
त्यहाँ धेरै प्रक्रियाहरू, टेम्प्लेटहरू, र व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरू छन्। व्यावसायिक परामर्श टोलीहरूले ग्राहकहरूलाई लन्च गर्न र अमेजनमा आफ्ना उत्पादनहरूलाई अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ. यी मध्ये अधिकांश प्रक्रियाहरू पहिले नै छलफल भएको छैन. त्यसैले, तपाईं इन्टरनेटमा यसको कुनै पनि जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्न. यी धेरै तरिकाहरू अनुकूलन प्रक्रियाको समयमा मात्र एकपटक गरिन्छ, वा जब एक चीज गलत हुन्छ. तपाईंले प्रत्येक दृष्टिकोणको विवरणमा जान आवश्यक छैन किनकि तपाईंको लागि सबै गरिनेछ. तपाईंको बिक्री सल्लाहकारहरूले सबै लंचहरू व्यवस्थापन गर्नेछन् र कुनै पनि अनावश्यक समस्याहरू जस्तै रैंकिंग ड्रपहरू, ग्राहक समस्याहरू, पूर्ति, र त्यसमा समस्या निवारण गर्नेछन्।. तिनीहरूले सबै सम्भावित अवसरहरूको फाइदा लिनेछन् र कलममा समस्याहरू समाधान गर्नेछन्.
व्यावसायिक अमेजन बिक्री परामर्शदाताहरूले तपाईंलाई अमेजन खाताहरू आफैंद्वारा व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा राम्रो अभ्यासहरू र प्रभावकारी उपकरणहरू
व्यापारीहरूको पहुँच प्रदान गर्दछ, प्राय: अनुसन्धान र व्यवसाय विकासमा समय छैन। दैनिक दैनिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुनाले जस्तै डेलिभर ह्यान्डलिङ, ग्राहक समर्थन सेवाहरू र अन्य ब्रान्डको गुणहरू प्रबन्ध गर्ने. त्यसोभए, सबै बजार उपन्यासहरू र उद्योग विकासको साथमा रहन यो चुनौती हुन सक्छ. त्यसोभए, तपाईंलाई एक व्यक्ति चाहिन्छ जसले अमेजन बजारमा निरन्तर रूपमा निगरानी गर्दछ र सबै खोजी र पीपीसी एल्गोरिथ्म विशिष्टताहरू, प्लेटफर्म क्षमताओं र यति धेरै जान्दछ।. Amazon बिक्री सल्लाहकारले तपाईंलाई आफ्नो व्यापारलाई यी सबै इ-वाणिज्य व्यापार उपन्यासहरूमा समायोजन गर्न र तपाईंको व्यवसायलाई कुनै पनि हराएको र वर्गीकरण ड्रपबाट सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।. साथै, अमेजन विशेषज्ञले कसरी यो परिवर्तनले तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्न सक्छ भनेर पहिचान गर्न सक्छ.
अमेजन बिक्री विशेषज्ञले तपाईंलाई आफ्नो अमेजन व्यापार खातालाई सम्भाल्न मद्दत गर्दछ र प्राथमिक व्यवसाय पक्षहरू र निर्माणका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न तपाईंलाई समय दिन्छ
धेरै व्यवसाय, विशेष गरी ठूला व्यक्तिहरू, अमेजनहरू आफ्नो सामान बेच्नका लागि थप बजारको रूपमा प्रयोग गर्छन्. त्यसोभए, तिनीहरू उत्पादनका मुद्दाहरूमा बढी ध्यान दिन्छन् र प्राथमिक बजारमा जस्तै आफ्नै वेब स्रोत वा अफलाइन स्टोर. धेरै भिन्न बिक्री, वितरण, र मार्केट च्यानलहरू एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न र बढ्न गाह्रो हुन्छ. तथापि, तपाईंले यो महसुस गर्नुपर्दछ कि अमेजनमा एक व्यवसाय चलिरहेको समयमा समय र लगानी चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ पनि तपाईले अफलाइन व्यवसाय चलाउँदा लगानी गर्नु भन्दा बढी भन्दा बढी.
व्यवसायिक विकासको लागी सफल कम्पनीहरू कहिल्यै बेलामा आराम गर्दैनन्. त्यहाँ प्रयास गर्न केहि नयाँ सुविधाहरू छन्, केही नयाँ सुधारहरू लागू गर्न, केही नयाँ संस्करणहरू सुरू गर्न, र विचार गर्न प्रशोधन गर्न. समृद्ध व्यवसायहरू पनि एक क्षणको लागि रोक्न सक्दैन किनभने यसले पैसा गुमाउँछ. तिनीहरू सधैँ लागतहरू चलाउन र मुनाफा बढाउन नयाँ दृष्टिकोणहरू पत्ता लगाउँछन्. लागतहरू कम गर्न र अधिक सम्भावित ग्राहकहरू लक्षित गर्न व्यापार विकास सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो. त्यसकारण, टाढाका व्यापारीहरूले आफ्नो समय र स्रोतहरूलाई बुद्धिमानी रूपमा आवंटित गर्नुपर्छ.
तपाईंलाई उत्पाद फीड कुश्ती भन्दा बढी सामरिक व्यवसायमा र अधिक समय समर्पित गर्न आवश्यक छ र पछिल्लो अमेजन रणनीति. पेशेवर अमेजन बिक्री बिक्री परामर्श सेवाहरू प्रयोग गर्दै, तपाईं प्राथमिक र आवश्यक चीजहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, जबकि अन्य पहलुहरू पेशेवरहरू द्वारा व्यवस्थित हुनेछन्.
रकमको लागि, जुन मैले माथि उल्लेख गरेको छु, म भन्न सक्दिन कि अमेजन बिक्रीको लागि यो उचित र लागत प्रभावी छ। परामर्शदाता, विशेषगरि यदि तपाईले धेरै मार्केटप्लेसहरूमा आफ्नो उत्पादन खुदरा बनाउनुहुन्छ. तपाईं आफ्नो अमेजन सूचीबद्ध सुधार वा भुक्तानी-प्रति-क्लिक विज्ञापन अभियान अनुकूलन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले आफैं गरेर भन्दा अनुभवी पेशेवरहरूसँग सहयोग गरेर थप प्राप्त गर्नुहुनेछ।. यसबाहेक, तपाईं आफ्नो व्यवसाय विकास र सुधारको लागि समय अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ Source .